यौनदेखि खेल मैदानसम्म दिमागमा रातो रंगको प्रभाव | Rajmarga
रातो रङ्ग शायद सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने रङ्ग हो । यसले कार्यालयमा तपाईको कामदेखि निजी सम्बन्धसम्म प्रभावित गर्दछ । तर, कसरी ? यसको जाँच गरिरहेका छन् डेभिड राबसन ।
महारानीको ताजको रङ्गदेखि एम्सटर्डमको रेड लाइट एसियासम्म रातो रङ्गलाई सत्ता, आक्रमण र सेक्ससँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। ‘रङ्गहरुको मनोविज्ञान’ बाट थाहा हुन्छ कि रातो रङ्गले हाम्रो मुड, विचार र काममा गहिरो असर पार्ने गर्दछ । यसबाट तपाईको फिजियोलजी र हर्मोन सन्तुलनमा र खेल मैदानमा प्रदर्शन पनि प्रभावित हुन सक्छ ।
अधिकांश स्तनधारी प्राणी कुकुरजस्तै रातो र हरियो रंगमा फरक छुट्याउन सक्दैनन् । जब हाम्रा पूर्वज जंगलमा जीवन बिताइरहेका थिए, तब उनीहरुको आँखाको रेटिनामा एक विशेष प्रकारको सेल विकसित भइरहेको थियो । यसले पातहरुको बीचबाट रातो चम्किलो फल छान्नेमा सहयोग गर्दथ्यो ।
विस्तारै रिस उठेका बेला नाक रातो हुनु, शक्तिको निशानी बन्यो । मेंड्रिल बाँदर यसको उपयुक्त उदाहरण हो । किनभने जति स्वस्थ बाँदर त्यति नै गाढा उसको नाकको रंग हुने गर्दछ ।
सन् २००४ मा युनिभर्सिटी अफ डरहमका मनोवैज्ञानिक रसेल हिल र रोबर्ट बार्टनले यस विषयमा शोध सुरु गरेका थिए कि किन मानिषमा यस्तो हुने गर्दछ । मानिस पनि ‘आक्रोशका समय रातो’ हुन्छन् ।
हिल र बार्टनले सन् २००४ मा ओलम्पिक खेलाडीहरुको पहिरनमा शोध गरे । बक्सिङ र तेक्वान्दोमा भएको यो शोधमा रातो रंगको पोशाक लगाउने खेलाडीमा जित्ने सम्भवना पाँच प्रतिशत बढी पाइएको थियो ।
हिल भन्छन्–रातो रंगको पोशाकले तपाईले जबरजस्त खेलाडी बनाउँदैन । तर, जब तपाई प्रतिस्पर्धा समान खेलाडीसँग हुन सक्छ तब यो जित र हारलको सन्तुलनलाई प्रभावित गर्दछ ।
फुटबल मैदानमा गरिएको शोधबाट यदि गोलकिपरले रातो रंगको पोशाक लगाएको छ भने पेनाल्टी सूटआउटमा गोलको सम्भावना कम हुने गरेको पाइयो ।
युनिभर्सिटी अफ रोचेस्टरका एन्ड्रयु एलियट भन्छन्– रातो रंगको पोशाक लगाउनेले तपाईलाई बढी प्रभावी सम्झन्छ, जसबाट मुटुको धड्कन र टेस्टोस्टोरोनको मात्रा बढ्दछ ।
केही फैशन विशेषज्ञहरुका अनुसार रातो टाइ लगाउँदा कार्यालयमा आफ्नो प्रभाव र अधिकार बढी भएको अनुभूति हुने गर्दछ । रातो रंगको पोशाक लगाउने महिलाले अधिक टिप्स पाउने गर्दछन् ।
तर, रातो रंगका कारण हुने आक्रमकताको नकारात्मक प्रभाव पनि हुन सक्छ । प्रोफेसर एलियट भन्छन्–रातो रंग पाकेको फलको हो । रिसाएको बेलाको अनुहारको रंग हो । सेक्स उत्तेजनाको रंग हो । त्यसैले यसलाई सधैं हाम्रो अस्तित्वसँग जोडेर हेरिनेछ । हामी बस यो कुराको पुष्टि गरिरहेका छौ कि जब हाम्रा पूर्वजहरुले आफ्नो जिउलाई रंग्याउन सुरु गरेका थिए तब के सोचे होलान् ? यही कि रातोजस्तो कुनै रंग छैन ? एजेन्सी
Previous post: लागुऔषध ओसारपसारमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला
Next post: बलात्कारको घटना ढाकछोप गर्ने अधिृकतलाई कानुनी कारबाही हुने